Fitohizan'ny hafatra : Re: Fara-andro - 23 Aprily 2018
endriny - 24/04/2018 15:50
samy (milaza-tena ho) nobitsihin'i Jesosy daholo anie ianareo ry RBNIr eee... Nefa dia io mifanipaka an-tsobika sy mifananao z'inona ao io, mifanebaka ho "mpandainga"...
Aoka aloha izany jerena: "I Jesosy dia tsy mpampiady an-tsena, fa mpiady an-tsena mihintsy"
Arak'i Jesosy dia: "Sambatra izay enjehina sy vonoina noho ny amin'izy Jesosy", ka dia tsy maninona raha miady mifaratika ao aza izy samby izy, fa amin'ny anaran'i Jesosy daholo izany.
RBNIR Ekena dia ekena fa tena i Jesosy ihany no torina nefa misy dia misy ireo mitory Jesosy hafa.....
Ahoana koa aza izany Lojika izany: "Jesosy iray ihany no toriana" nefa misy ireo mitory "Jesosy hafa"
Efa hoe Jesosy iray hono dia mbola misy Jesosy hafa koa... Ilay baiboly ampiasaina anefa tokana ihany. Ka angaha hita moa fa na teny iray aza samy hafa ny dikany ho an'ny tsirairay satria samy hafa ny fanomezam-pahasoavana nomen'Atra ny olona e.
Paoma lasa firaisana
Fofon'aina lasa fanahy masina
vehivavy lasa fiangonana
vehivavy mitafy masoandro lasa frantsa miravaka angovo nokleary
Saoly lasa Paoly
Fransisy lasa Papa...
rhaj0 - 24/04/2018 17:13
rhaj0 Maninona moa ry RBNIR, rahefa alefa ihany ny imazination-nao ao, maninona moa tsy mihevi-tena ho .. i ONANA i RBNIR eee... Izy io anie ka tena izilay aminy eee...
RBNIR ... ONANA???
Esy e ry RBNIR.. .dia TSy hain'i RBNIR akoriny ny tantaran'i Onana. NEfa anie, ny nataon'i Onana no ataon'i RBNIR ao HONO ee..
Ka tena ao izany nareo roaroa ry RbNIR sy Onana aaa.. great minds think alike
RBNIR - 25/04/2018 09:17
nahoana moa aho no milaza hoe mitovy amin'i ONANA ianao rhajo? satria rehefa hitanao fa tsy hovoatarikao ny olona hanaraka ny tsy finoanao dia korontaninao ny lohany tsy hanaraka ilay fampianarana tsy misy kilema......
Rehefa tsy ho ahy ihany dia aleo......IZAY MANANA AN'IZAY TOETSAINA izay no manana ny toetsain'i ONANA....
Fa raha fitiavana kosa ny mameno ny fon'ny olona iray dia tsy ahoany na ho an'iza na ho an'iza ny zaza fa ny fantany dia hoe rehefa voavonjy ireo dia ampy ho fifaliako izay....
rhaj0 - 25/04/2018 19:42
Mouah ha ha.. dia tena TSY hain'i RBNIR akoriny ny tantaran'i Onana.. TSISy Onana manakorontana toa-tsain'olona izany..
inty re ilay izy ao @ Genesisy ee.. Dia vakio tsara ny tantara.
Dia tsy mba menatra ve ianao ry RBNIR TSY mahay Genesisy, nefa boky voalohany ilay izy io???
Genesisy 38: 8 Ary hoy Joda tamin'i Onana: Vadio ny vadin'ny rahalahinao, ka ento loloha izy, dia velomy maso ny rahalahinao.
Ary tsy vitan'ny hoe "tsy hain-dRBNIR ny Genesisy", nefa dia ny ataon'i Onana ao @ Genesisy ho'a no toa ataonao ao HONO ee...
O ry RBNIR.. dia ny vadin'i Hrnrn angaha tsy mbola ao, no dia inona no hanaovanao RBNIR "mitondra loloha" an'i Hrnrn ao??
RBNIR - 26/04/2018 06:55
9	Ary fantatr'i Onana fa tsy ho azy tsinona ny zaza;
Io ilay nolazaiko hoe ....
rhaj0 - 26/04/2018 14:11
hay ve izany HONO ilay "tantara" araky ny fandroritana elastikan'i RBNIR ee..
Nefa anie tsotra be ilay izy.. Nasaina nanambady (forcé) ny vadin-drahalahiny i Onana.
Fony fahavelon'ny rahalahiny, moa ve tsy hotry ny hoe "anabavy" ary tsy azo "pehana" ny vadin-drahalahy??
Sa hafa ny anareo ry RBNIR? i RBNIR izany ao efa milendalenda mihintsy ao isan'andro, fa hoe, rahatrizay lasana i Hrnrn, dia tena ho an'i RBNIR @ izay ny vadin'ilehio an...
Dia rehefa noterena hanambady ihany, dia fara-faharatsiny, hozy Onana, tsy asiana zazakely ee...
Taiza koa no nisy lojika hoe, supermataozaohidanao no niterahana ilay zaza, nefa HONO "TSY ho anao" ny zaza.. Taiza no misy olona miteraka, dia TSY ho azy ny zanany, noho ny mazia-mazia hocus pocus-n'izao bainina kondrana rehetra izao?..
RBNIR - 26/04/2018 14:26
Fony fahavelon'ny rahalahiny,
Efa maty ilay rahalahiny tamin'io fa tsy hoe fony fahavelony....« Fa ratsy fanahy teo imason'1 Jehovah Era, lahimatoan'i Joda; dia novonoin'i Jehovah izy. » (Genesisy 38:7)
rhaj0 - 26/04/2018 14:39
rhaj0 - 26/04/2018 21:10
RBNIR ...tsy hovoatarikao ny olona hanaraka ny tsy finoanao dia korontaninao ny lohany ..
Esy e ry RBNIR...
- Dia heverin'i RBNIR fa mijery anareo toa ny ONDRY, ka "ho taritina hanaraka ny tsy-finoana" izany izaho ito. TSISY mihevitra ny "hitarika" anao eto ry RBNIR aaa... ny resaka eto dia, efa lazaina foana fa hoe "atsipinay ilay kaozy, (tsy) mihaino ianao dia tsara".
Ny olona (normal) anie ry RBNIR dia TSISY mpanjanaka saina sy mpi-infantiliser olona toa an'i Hrnrn sy ireo mpilaza-tena ho "mpitory" ee... Asa raha mba takatrao ihany izany ao @ garabolanao ao... Eritrereto tsara ao ee... Eritrereto tsara ao.
- Dia tena lazainao fa "korontanina ny lohanao" @ resaka eto ve ry RBNIR?
Nefa anie dia efa ampirisihina foana ianao ry RBNIR mba "hampiasa coco": manakorontana saina ve ny "fampiasana coco"?
Dia esy ho'a ry RBNIR.. dia asa foana mihintsy ny fi(s)ainanao ao @ garabolan'i Hrnrn ao, fa dia confus tokoany mihintsy anie ianao izany e...
endriny - 28/04/2018 13:18
Izay tokoa moa izany ny Kristianina a: isaky ny miresaka izy dia ny hampiditra ondry ao am-bala, hanarato olona, hamafy voatsinefy, hampody ny ondry very. Dia izay foana ve?
Efa eto @ forum isika dia mbola izay ihany.
RBNIR - 02/05/2018 09:17
Aleo angamba hofitinina ny resaka...
Raha fintinina dia izao no hafatra teto.... Mitandrema amin'ny mpampianatra sandoka, indrindra ireny manome daty mazava momba ny fara-andro ireny na dia milaza aza izy fa nisehoan'i JEsosy,
satria efa voasoratra fa hisy ny hitory Jesosy hafa (Jesosy ihany no toriny nefa ny fampianarana ataony tsy mitovy amin'ny fampianaran'Ilay Jesosy tonga tety 2000 taona lasa izay)....
Eto moa dia voaporofo fa tsy marina no nambaran'ilay olona lazain'i rhajo fa mpianatr'i JEsosy sy nisehoan'i JEsosy teto....
endriny - 02/05/2018 11:43
Ahoana no ilazanao Fa tsy marina ny nolazainy?
RBNIR - 02/05/2018 12:20
Satria iarahamahita fa tsy tanteraka izay nolazainy endriny...
rhaj0 - 02/05/2018 13:22
Ary mba efa nisy tanteraka ve ny nolazaina(re)o na "faminanianareo" ry RBNIR (sy Hrnrn)?
Sa moa nareo TSY manao "faminaniana"?
- satria nareo kanosa, dia TSY mahasahy manohy ny lojikanareo, fa manahofahofa fa "ho avy" dia "ho avy" fotsiny no mba "faminanianareo".
- sa, "sandoka" koa kay ity RBNIR (sy Hrnrn) dia TSY mahalala n'inon'knona, TSy mahavita "faminaniana", satria TSY mba bitsihin'i Jesosy mihintsy
RBNIR - 02/05/2018 16:13
Vao manomboka izao ny asan'ny anjely telo rhajo!!!
RBNIR - 02/05/2018 16:17
Aoriana kely ao dia ho lasa universelle fa ny fivavahana kristiana sisa no mahazo mijoro, fa ny sisan'izay kosa tsy maintsy ravana!!!
Ankoatran'izay dia hitsangana ilay bibidia ka ny didy hatsangany voalohany dia hoe tsy misy mahazo mivavaka amin'ny andro Sabotsy intsony fa ny Alahady irery ihany sous peine de......
aza andrasana ho tonga hoy aho izany fa izao dia minoa ary mibebaha daholo!!!
rhaj0 - 02/05/2018 19:04
RBNIR ... hitsangana ilay bibidia ka ny didy hatsangany voalohany dia hoe tsy misy mahazo mivavaka amin'ny andro Sabotsy intsony fa ny Alahady irery ihany ...
Hay va re ry RBNIR fa ny Bibidia no nilaza an'io fa tsy Jesosy na koa i Andrmntra eee..
Ny Bibidia, HONO hoz'i RBNIR, no mampivavaka "ny Alahady (irery ihany)".
Eny azany koa.. Izaho indray ve hi-contredire anao ry RBNIR...
Ka dia "mitsangana", mijoroa (@ teorianao) ry RBNIR aaa...
RBNIR - 03/05/2018 07:36
Izay andro ivavahan'ny Jiosy ankehitriny no andro voadidin'Andriamanitra hivavahana,
Io andro io ihany koa no nivavahan'ireo kristiana tany amboalohany....
Des chrétiens dans la suite de l'Église de Jérusalem continuent d'observer les prescriptions de l'Ancien Testament et en particulier le shabbat.
Olombelona no nanova azy io taty aoriana (efa taty aoriana be) fa ny kristianina tany amboalohany dia mbola nitandrina ny andro fahafito araka ny voasoratra anaty baiboly....
Ankehitriny niverina indray i JEsosy ary nilaza fa tsy maintsy miverina amin'ny fampianarana tsy misy kilema ny olona (ilay nampianariny 2000 taona lasa)....Maro no hanaiky ka hiverina,
Hisy kosa olona iray (bibidia) hitarika ny olona tsy hiverina amin'izany fa hiziriziry hitandrina sy hampitandrina ny olona ny andro alahady ihany.....
rhaj0 - 03/05/2018 12:34
ahodikodony dia asafotofotoy ny resaka ry RBNIR aa... Aza asiana ilay honetetehy mihintsy fa tsy ara-Baiboly izany ry RBNIR aa...
Fa tsisy manadino ny teorian-dRBNIR eto ee..
Hoy RBNIR t@ feo mahery ... hitsangana ilay bibidia ka ny didy hatsangany voalohany dia hoe tsy misy mahazo mivavaka amin'ny andro Sabotsy intsony fa ny Alahady irery ihany ...
== ilay Bibidia no mampivavaka isak'alahady, hoz'i RBNIR.
Izaho indray ve hi-contredire anao @ izany ry RBNIR
RBNIR - 04/05/2018 08:30
Tsy izaho re no milaza an'izany fa ny baiboly rhajo a!
« Aza mety hofitahin'olona akory ianareo; fa tsy ho avy izany, raha tsy efa tonga aloha ny fihemorana, ka hiseho ilay lehilahin'ota, dia ilay zanaky ny fahaverezana, » (2 Tesaloniana 2:3)
« ilay manohitra ka manandra-tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra, na izay ivavahana, ka dia mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra. » (2 Tesaloniana 2:4)
« Ary dia haseho ilay tena mpandika lalàna, izay holevonin'i Jesosy Tompo* amin'ny fofonain'ny vavany ary hofoanany amin'ny fisehoan'ny fihaviany; [* Na:(holevonin'ny Tompo)] » (2 Tesaloniana 2:8)
« ny fihavin'ilehiny dia araka ny fiàsan'i Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra » (2 Tesaloniana 2:9)
Ilay bibidia dia tsy iza fa io lehilahin'ota voalaza eo ambony io : mipetra eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamantra (manova ny lalàna nomen'Andriamanitra)
Aminy dia zavatra mora foana no manova ireo lalàna voapetraka anaty baiboly ireo...
Hanova ny lalàna napetrak'Andriamanitra
hitaona ny olona hanaraka ny lalàna vaovao apetrany,
Hanenjika sy hampamono ary hampijaly izay mbola sahy mifikitra amin'ny lalàna voasoratra ao anaty baiboly....